Fanadihadiana: Tena zava-dehibe ve ny fanangonana sa ny fanaovana zava-dehibe? | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 1, 2013 Alahady, Martsa 31, 2013 Jenn Lisak Golding
Amin'ny maha mpivarotra azy dia mamokatra votoaty isan-kerinandro (na isan'andro mihitsy aza izahay) mifantoka amin'ny tsenantsika lasibatra, mamporisika ny vinaninay hitady sy hamaky ny atiny. Amin'ny lafiny iray amin'ny vola, manantena izahay fa handray anjara sy haneho hevitra momba ny atiny izy ireo hahafahanay manomboka resadresaka (mifototra amin'ny alalana) amin'izy ireo. Etsy ankilany, izahay koa dia mila mameno ny takelaka fizarana pejy handraisana whitepapers na fandinihana tranga mba hahafahanay manangona tahirin-kevitra bebe kokoa momba ny hoe iza izy ireo, orinasa inona no iasan'izy ireo, ary karazana atiny inona no tian'izy ireo horaisina . Na izany na tsy izany, manomboka ny fifandraisana amin'ireo antenaintsika isika amin'ny fanantenana hikolokoloana izany fifandraisana izany rehefa mandeha ny fotoana hanovana azy io ho fiovam-po.
Ny fidirana sy firesahana amin'ireo fanantenana amin'ny Internet dia mety hahasoa tokoa, ary afaka manomboka fifandraisana "organika" izany. Ny vinavina dia afaka misafidy ny hifanaraka amin'ny marikao na tsia, ary na dia manentana sy manome votoaty mavitrika aza ianao dia miteraka fotoana iray hanatonan'izy ireo ny heviny manokana. Ny fikolokoloana ireo vinavina ireo dia mety ho mafy kokoa sy maharitra kokoa, saingy mamela azy ireo hifandray aminay amin'ny fombany manokana amin'ny fotoany avy izany.
Fa izahay koa te-ho afaka hisambotra fitarihana “malefaka” hahafahantsika manara-maso ny fihetsiky ny vinavina rehefa mitsidika ny tranokalanay izy ireo na mifandray amin'ny marika amina fomba hafa. Izany no antony hamoronana pejy fitobiana miaraka amina endrika hahafahantsika misambotra vaovao misimisy kokoa momba ny vinavinantsika ary manomboka manantona azy ireo amin'ny fampielezan-kevitra mikolokolo anay. Manana hevitra mazava momba ny fahalianan'izy ireo izahay, ary koa ny atiny manintona azy ireo.
Ka io no mametraka ny fanontaniana: iza no tena zava-dehibe, fanangonana angona na mpanjifa mandray anjara? Inona ny hevitrao? Mazava ho azy, samy manan-danja izy roa amin'ny fomba fijery marketing, fa iza amin'ireo hetsika ireo no manampy ny orinasanao hahazo ny fiovam-po?
Safidio ny iray amin'ireo safidy ao amin'ny fanadihadiana an-tserasera etsy ambany, ampiasain'ny mpanohana ny teknolojia anay,Formstack . Izy ireo dia mikarakara orinasa kely miaraka amina mpamorona endrika an-tserasera, pejy fandraisana, ary fampielezan-kevitra amin'ny mailaka, izay misy ao avokoa Analytics ary fampidirina tsy misy tambiny amin'ireo rindrambaiko efa misy toy ny Mailchimp, PayPal, Google docs, ary maro hafa.
Lazao anay ny hevitrao ary hanoratra momba ny valiny izahay afaka 2 herinandro! Aza misalasala mizara ny hevitrao etsy ambany.
[Id fidirana = 1391931 viewkey = BKG2SPH7DU]
Fanavaozana ny tambajotra sosialy isan'andro avy amin'ny NutshellMail